शाक्य र आचार्यलाई माधव नेपालको सन्देशः मुख्यमन्त्री रोज्ने कि एमाले ? - Jyotinews
शाक्य र आचार्यलाई माधव नेपालको सन्देशः मुख्यमन्त्री रोज्ने कि एमाले ?
ज्योतिन्यूज २०७८ भदौ १४ गते १०:२०
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश १ र वाग्मतीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरुलाई कि त पद रोज्न कि त एमाले पार्टी रोज्न सन्देश पठाएका छन् ।
भदौ १ गते आफ्नै अध्यक्षतामा माधव नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गरे र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। तर, नेपालले मरिमेटेर साथ दिए पनि शाक्य र आचार्य दुवैले उनलाई साथ दिएनन्। बरु नेपालको साथ छाडेसँगै उनीहरु दुवैलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर आयो। शाक्यले भदौ २ गते र आचार्यले भदौ १० गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए।
भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ पार्टीको मान्यता दियो। त्यसैले आफूलाई साथ नदिएका दुवै नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने अवस्थामा नेपाल छन्। विभाजन हुनुअघि एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश १ र बागमतीमा माधव नेपालले दुवै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने तयारी नै सुरु गरिसकेका छन्। र, यी दुवैलाई हटाउने शक्ति पनि माधव नेपालसँग छ।
दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा परिसकेका छन् । उनीहरु ओलीतिरै खुलेको अवस्थामा अध्यक्ष नेपालले दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने आफ्ना पक्षका नेताहरु तयार पारिसकेका छन्। बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे र प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ। ‘उहाँहरु (शाक्य र आचार्य) दुईजना मुख्यमन्त्री हाम्रै पार्टीमा आउनुभयो भने मुख्यमन्त्री पद जोगियो,’ सांसद जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘ओलीकै पार्टीमा बस्नुभयो भने मुख्यमन्त्री बनाइराख्दैनौँ। हाम्रो पार्टीमा नभएका व्यक्तिलाई किन राख्छौँ र ? उहाँहरुको पद धरापमा छ।’
‘उहाँहरुलाई मुख्यमन्त्री रोज्ने कि पार्टी रोज्ने निर्णय गर्नुस् भनेर भनिसकेका छौँ,’ उनले थपे। एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुले भदौ २२ सम्म दल बदली गर्न पाउने छन्। २२ गतेसम्म धेरै सांसदहरु आफ्नो पक्षमा खुल्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुखहरु फेरबदल गरिसकेका छन्। गठबन्धनकै सरकार रहेकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले अन्य दलको साथ पाउने सम्भावना कम छ। त्यही भएर दुवै मुख्यमन्त्रीहरुलाई बढीमा २ दिनमात्र कुर्न सकिने नेताहरुले बताएका छन् । अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि पद रोज्ने कि एमाले रोज्ने समय दुई दिन रहेको र आफूलाई यस बारे जानकारी दिन सन्देश पठाएका हुन् ।